Maxaad Ka Taqaan Cudurka Jadeecada? - Daryeel Magazine
Maxaad Ka Taqaan Cudurka Jadeecada?
Jadeecada waxaa keena fayrus jeermis aad u xun wata. Ugu badanaan qof walba oo uu ku dhaco cudurkani wuxuu yeelan doonaa xummad aad u xun, firiiric oo bukaan ayuu ahaan doonaa. Carruurtu caadi ahaan waxay sariirta jiifaan ilaa iyo shan maalmood waxayna dugsiga ka fadhiyi karaan ilaa iyo toban maalmood. Dadka weyni waxaa suurogal ah inay waqti intaas dhaafsan sii bukaan. Lama ogaan karo qofka sida xun uu cudurka jadeecadu ugu dhici doono. Dhibaatooyinka jadeecadu waxay gaartaa 15kii carruur ahba hal. Dhibaatooyinka yimaada waxaa ka mid ah jeermis dhagta, laabta iyo marinnada hawada laga neefso ee sare ku dhaca, shuban, iyo qallalyo, iyo (marmar dhif ah) encephalitis (maskaxda oo bararta), ama waxyeello maskaxda gaarta. Mararka ugu xun, cudurka jadeecada waa loo dhintaa. Xataa carruurta caafimaadka badan ayaa u dhinta jadeecada.
Ma hubo in ilmahayga hore loo siiyay tallaalka jadeecada. Maxay tahay inaan sameeyo?
Haddii uu shaki kaaga jiro waa in markaas ilmahaaga la siiyo talaalka. Waxyeello uma keenayso haddii hal jeer oo dheeraad ah la siiyo.
Carruurta la siiyay tallaalada hal hal loo bixiyo ee jadeecada, qaamo-qashiirta iyo rubella waa inay weliba qaataan MMR ( qaamo-qanshiir,jadeecada, jadeeco beenta). Tani sababteedu waxa weeye in aan la hayn daliil caddaynaya in tallaalada hal hal loo bixiyoo ee la isticmaalay ay keenaan ilaalin fiicnideedu la siman tahay ta uu keeno tallaalka isla socda ee isku jira.
W/Q: DR. Usama Cismaan
Maxaad Ka Taqaan Cudurka Daafka Indhaha?
Maxaad Ka Taqaan 10-ka Qoys Boqortooyo Ee Ugu Hantida Badan Caalamka
Maxaad Ka Taqaan Furayaasha Qalbiga Gabadha?
Maxaad Ka Taqaan Faaidooyinka Caafimaad Ee Sabiibka